Books on Movie showed during the period of 2013 and 2017 in Japan have now arrived at JCH
၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၇ အတွင်း ဂျပန်မှာပြသခဲ့တဲ့ ရုပ်ရုင်တွေအကြောင်းကို နှစ်အလိုက်ခွဲပြီး ရေးထားတဲ့စာအုပ် JCH မှာရောက်နေပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ နှစ်မျိုုးနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက် ဂျပန်ရုပ်ရုင်ကို ဘယ်ကားကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး တွေဝေနေသူများ ဖတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Location of JCH
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ရက် ( သောကြာနေ့ ) ညနေ ၆နာရီကစပြီး JCHမှာ " Story of Khiam " ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းပြသပြီးနောက်မှာ " မြန်မာ့ရိုးရာဂီတအကြောင်း " Lecture ပြုလုပ်ပါမယ်။ အားလုံးလာမှာကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။
JCH ရဲ့ floor plan လေး ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
Building C ဘက်ကဓါတ်လှေကားကနေ တက်လာမယ်ဆိုရင်၂လွှာခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်လှေကားက ထွက်ထွက်ချင်း လှေကားကိုတွေ့ရင် လှေကားရဲ့ဘယ်ဘက်နားအတိုင်း လျှောက်လာခဲ့ပါ။
နောက်တနည်းက Building Dဘက်က LOTTERIA နားက ဓါတ်လှေကားကနေလာမယ်ဆိုရင် ၃ လွှာခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တက်လာနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်ရောက်ရင် ညာဘက်ချိုးပြီး ဘယ်ဘက်ကလမ်းအရှည်အတိုင်း တည့်တည့်လာပါ။ လှေကားအကျော်နားရောက်ရင် ညာဘက်ထပ်ချိုးလိုက်ရင် JCHသို့ရောက်ပါပြီ။
本日、8月18日（金）18時よりJCHでは「Story of Khiam」上映と「ミャンマーの伝統音楽について」の講演をおこないます。みなさまのお越しをお待ちしています。
Today, on August 18, " story of khiam " isalecture on " story of khiam " and " Myanmar traditional music We're looking forward to hearing from you.
I'll explain the location of the jch in the pearl.
If you want to use the c-Wing Elevator, press the 2th floor. As soon as you get down, the stairs will be in your eyes, so please proceed to the aisle on the left side of the stairs.
I'll give you another way.
Press The 3th floor when you use the elevator near lotteria. Please turn right when you get down. It'salong time since the song is so long, but I see the stairs so that I can turn to the right and turn to the right.